Semalt dia manolotra fampisehoana mahatalanjona
Mpandika tranonkala iray dia fandaharana mivezivezy amin'ny aterineto mba hitady loharanony ho toy ny automated teny. Mitady teny manan-danja, rohy ary votoaty isan-karazany ao amin'ny tranonkala. Raha ny marina, ny fikorontanan'ny tranonkala dia mifantoka amin'ny fitadiavana fampahalalana mahasoa ho an'ny mpampiasa azy amin'ny harato - magnus tank rbas.
Ahoana ny tranonkala mpitrandraka tranokala
Mitifitra tranokala ao amin'ny tranokala ny tranonkala iray ary manasokajy azy ireo amin'ny fomba maika hanamafisana fanontaniana. Ireo mpilalao amin'ny tranonkala dia manao ny asa rehetra eo ambanin'ny anarana samihafa, toy ny robots sy ny endriky automatique. Isaky ny mpikaroka amin'ny tranonkala dia manondro karoka fikarohana voafaritra, ireo mpitsikilo dia afaka mijery ireo pejy rehetra manan-danja mba hahitana ny antonta marina. Rehefa mitsidika tranonkala iray ny mpitsikilo, dia afaka mitady pejy hafa izay mendrika ny hitsidika ihany koa izy ireo. Vokatr'izany dia afaka mifandray amin'ireo tranonkala vaovao ireo mpitsikilo amin'ny tranonkala, mandray ireo fanamarihana mety amin'ny fanovana amin'ny tranonkala efa misy ary ahafahany mahita ireo rohy maty. Amin'izany fomba izany, ny mpikirakira ny tranokala dia afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny tranonkala isan-karazany mba hanangonana ny vokatra takian'ny mpanjifany. Ankoatra izany, tompon'ny tranonkala dia afaka manapa-kevitra hoe iza amin'ireo pejy tadiaviny hotakiana.
Data Mining: Fitaovana mahomby
Ny fitrandrahana anaty rakitra dia afaka manampy ireo mpitsikilo amin'ny tranonkala handraisana ireo vaovao isan-karazany amin'ny tahiry amin'ny alalan'ny Internet. Ity asa ity dia mamonjy azy ireo amin'ny fotoana sy ny hery, ka noho izany dia afaka manao tetikasa hafa ho an'ny orinasa izy ireo. Misy fitaovana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay afaka mandinika ny fitondran-tenan'ny mpampiasa sasany ary afaka maminavina ihany koa ireo fironana izay afaka manampy ny orinasa hiroborobo. Ankehitriny, ny fitrandrahana angon-drakitra dia afaka mahita fomba manokana momba ny angona ao amin'ny aterineto izay mety handiso fanantenana mihitsy aza ny matihanina. Ny fitrandrahana ny data dia dingana lehibe sy malaza. Mandritra ny dingam-pamokarana, ny mpikaroka web dia tsy maintsy miatrika hadisoana maromaro, toy ny angon-drakitra sasantsasany izay amin'ny fiteny samihafa sy marika tsy ara-dalàna.
Maka data avy amin'ny sary
Maro amin'ireo orinasa ankehitriny no maka sary ihany koa ny fampitahana amin'ny mpivarotra, ary matetika izy ireo no mandinika azy ireo mba hanomezana tsaratsara kokoa ho an'ny mpanjifany. Amin'ny alalan'ny fampiasàna ny tranokala, dia afaka mahita ny sarin'ireo vokatra mitovy, ary koa ireo vokatra mitovy amin'izany eny an-tsena.
Ny maha-zava-dehibe ny mpikaroka web
Ankehitriny dia maro ny orinasa mampiasa mpiserasera amin'ny aterineto mba hananana fanatrehana mahery vaika amin'ny aterineto, amin'ny famoahana angona isan-karazany, toy ny vidin'ny vokatra mitovy, hevitra , lisitra mifandray sy sary maro. Ireo sary novoriny dia afaka manampy azy ireo hanatsara ny tolotr'izy ireo ary hanome vokatra sy vidiny tsara kokoa noho ny mpifaninana aminy. Vokatr'izany dia afaka manatsara ny orinasany izy ireo ary hahomby kokoa. Noho izany, ny mpikirakira ny tranonkala dia mety ho fanampiana mahavariana ho an'ny orinasa, toy ny tranonkala e-commerce sy bilaogy hafa, izay te-hahomby sy mahomby. Betsaka ny orinasa manerana izao tontolo izao no mitady ny fomba mahomby indrindra sy mandroso mba handresena ireo mpifaninana aminy ary hahazo mpanjifa hafa. Ireo mpilatsaka an-tserasera dia afaka manampy azy ireo hahomby kokoa, amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, manana vidiny mora kokoa ary manome tsaratsara kokoa.